चलचित्र Archives - RatoKalam.com is No one news portal.
‘पुरानो बुलेट’लाई दर्शकको साथ
शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘पुरानो बुलेट’लाई दर्शकले अत्यधिक मन पराएका छन् । ‘ठेट’ नेपाली संवाद र पुर्वेली लवजलाई समावेश गरी क्रेजी इन्टरटेनमेन्टले प्रथम पटक निर्माण गरेको यस चलचित्रलाई बालक, युवा युवती, वृद्ध सबैले रुचाएको पाइएको छ । झापा विर्तामोडको क्युएफएक्स हलमा चलचित्र हेरेर निस्किाएका तेज लिम्बुको आँखा रसाएको थियो...
पूर्वेली ठेटको ‘पुरानो बुलेट’ : यसकारण हेर्नैपर्छ
काठमाडाैं । फिल्मलाई मनोरञ्जनको उद्योग मानिन्छ । फिल्मले दिने पनि मनोरञ्जन नै हो । यदि यो सर्तलाई मान्ने हो भने ‘पुरानो बुलेट’ अच्छा छ ।
नाम ‘पुरानो बुलेट’ भएपनि यसले युवा सपना, प्रेम र संघर्षलाई देखाएको छ । फिल्मले तपाईंलाई पूर्वी तराईको लेटाङमा पु-याउँछ । रुख–बोट्यानले पालुवा फेर्दै गरेको मनमोहक मौसमलाई...
सिनेमाघरमा ‘पुरानो बुलेट’’, ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ र जानी नजानी
काठमाडौं, चैत्र १ । शुक्रवार प्रदर्शन अन्तर्गत आजदेखि देशभरका सिनेमाघरमा तीन चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन् । आजदेखि प्रदर्शनमा आएका चलचित्र हुन्- ‘जानी नजानी’, ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ र ‘पुरानो बुलेट’ । बसन्त अधिकारीको ‘जानी नजानी’ डेब्यू निर्देशित चलचित्र हो । चलचित्रको प्रस्तुतकर्ता हुन् रोशनी केसी । मनिष श्रेष्ठ, निरिशा बस्नेत, सन्नी सिंह,...
काठमाडौँ – राम्रो अभिनय गर्ने अभिनेत्रीका रूपमा स्थापित निरुता सिंह झन्डै आठ वर्षको विश्रामपछि पुनः अभिनयमा फर्किएकी छन्। साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ । सिंगलबाट मिंगल हुने बेला भएन र ? बेला नभएको कहाँ हो र, उल्टो बित्न पो लाग्यो त। अनि विवाहका लागि किन ढिलाइ त ? लौन, एउटा राम्रो ज्वाइँ खोजिदिनुस् न, मत...
हास्य कलाकारको भरमा नेपाली चलचित्र ! अरु चलचित्रहरु दर्शकको रोजाइमा पर्न सकेन
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र उद्योग हास्य कलाकारको भरमा टिकेको छ । हास्य कलाकारले निर्माण गरेको चलचित्र दर्शकले रुचाए पनि अहिले अरु चलचित्रहरु भने दर्शकको रोजाइमा पर्न सकेको छैन । ‘छक्का पञ्जा–३’ पछि अहिले कुनै पनि चलचित्रले राम्रो आम्दानी गर्न सकेको छैन । कुल १७ करोड रुपियाँ कमाइ गरेर यस चलचित्रले आफूलाई...
बविना बस्नेत , दमक,१३ फागुन । दमकका युवा शैक्षिक व्यवसायी धनराज सुब्बाको लगानीमा निर्माणमा नेपाली कथानक चलचित्र “सत्यम शिवम सुन्दरम“ को सोमबारदेखि छायाङकन शुरु भएको छ । दमकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चलचित्र दमकबाट छायाङकन शुरु गरिएको चलचित्रका निर्देशक शंकर अधिकारी घायलले बताए । चलचित्रको अधिकांश भाग प्रदेश १ मै सुटिङ हुने...
फिल्म ‘पुरानो बुलेट’को वर्ल्ड प्रिमियर हङकङमा सम्पन्न
सञ्चारकर्मी भीषण राईको डेब्यू निर्देशनमा तयार फिल्म ‘पुरानो बुलेट’को वर्ल्ड प्रिमियर हङकङमा सम्पन्न भएको छ । शनिबार हङकङस्थित याउ माइ तेइ हलमा फिल्मको ग्राण्ड प्रिमियर भयो। पुर्वेली जनजीवनलाई केन्द्रित गरेर निर्माण गरिएको फिल्मलाई हङकङ निवासी नेपाली दर्शकले रुचाएका छन् । फिल्मको प्रस्तुती, कलाकारहरुको अभिनय सबै पाटोलाई दर्शकले रुचाए, आयोजक मध्येका...